Inona no lanjan'i Guy Fieri? Mihetsika ny mpankafy satria nanao sonia ny fifanarahana amerikana amerikana $ 80 tapitrisa miaraka amin'ny Food Network ireo mpankafy amerikana - Pop-Kolontsaina
Inona no lanjan'i Guy Fieri? Mihetsika ny mpankafy satria nanao sonia ny fifanarahana amerikana amerikana $ 80 tapitrisa miaraka amin'ny Food Network ireo mpankafy amerikana
Guy Fieri dia nanao sonia fifanarahana vaovao amin'ny Food Network izay hitazonana azy any mandritra ny taona vitsivitsy, ary ho valiny dia hahita vola be ho an'ny mpampiantrano TV izy.
Araka ny voalazan'i Forbes, i Guy Fieri no chef be karama indrindra amin'ny fahitalavitra rehefa nanao sonia fifanarahana tamin'ny Food Network ho fanitarana fifanarahana. Mitentina 80 tapitrisa dolara ny fifampiraharahana ao anatin'ny telo taona ho avy izay mitentina 30 tapitrisa dolara isan-taona ho an'i Guy Fieri.
Mametraka ny fanitarana ny fifanarahana naharitra 3 taona an'i Guy Fieri… 🤯 pic.twitter.com/XfQicc8J4Y
- Slam Studios (@SlamStudios) 26 Mey 2021
Ny fifanarahana vaovaon'i Guy Fieri dia mahatonga azy ho iray amin'ireo mpampiantrano karama TV be karama indrindra https://t.co/Wj5Epl0k7p pic.twitter.com/8q7Wqtal8A
- Forbes (@Forbes) 25 Mey 2021
Guy Fieri dia iray amin'ireo manintona indrindra ary mpandray tsy tapaka ny Tambajotra Sakafo. Ny sasany amin'ireo fandaharana ananany ao amin'ny tambajotra dia misy ny 'Lalao Grocery Guy' sy ny 'Diners, Drive-ins ary Drives '. Ny seho nataony dia miteraka vola miditra amina taonina ho an'ny Tambajotra Sakafo sy 'Diners, Drive-ins, Dives' fotsiny izay nahazoana doka 230 tapitrisa dolara tamin'ny taona 2020.
Mazava fa i Guy Fieri dia mendrika ny fifanarahana vaovao ary betsaka kokoa ho an'ny Tambajotra Sakafo, ary fivarotana lehibe izany raha oharina amin'ny fifanarahana farany nataony.
Fanehoan-kevitr'ireo mpankafy an'i Guy Fieri sy ny fifanarahana nifanaovany tamin'ny Food Network
Tsy i Guy Fieri irery no chef be karama indrindra amin'ny fahitalavitra tambajotra ankehitriny, fa izy dia isan'ireo mpampiantrano fahita be karama amin'ny ankapobeny. Ny fifanarahana $ 80 tapitrisa dia fifanarahana somary goavambe raha ampitahaina amin'ny tambajotra hafa, ary tsy mahagaga raha manerana an'ity vaovao ity ny mpankafy.
Ahoana ny fandehanan'i Guy Fieri manodidina ny Network Food pic.twitter.com/kgR7AUwsnF
- Josia Johnson (@ KingJosia54) 25 Mey 2021
Tsy misy olona:
Guy Fieri mitondra Food Network ao an-damosiny: https://t.co/VFG5b4qL5R pic.twitter.com/fp0yCqrGlb
- Angel (@ AngelComp9) 25 Mey 2021
Guy Fieri miady amin'ny olon-drehetra ao amin'ny Food Network pic.twitter.com/GPLpiR0RyT https://t.co/mhVfqoW7Ol
- Sami Jarjour (@SamiOnTap) 25 Mey 2021
Tamin'ny fifanarahana teo aloha dia nanao sonia nandritra ny telo taona sahala amin'ny Food Network i Guy Fieri. Na izany aza, kely kokoa ny vidiny, ary nomena 30 tapitrisa dolara izy nandritra ny telo taona. Na dia tsy vola kely amin'ny fifanarahana aza izany dia ampahatelony ny haben'ny vaovaon'i Guy Fieri.
Ny fifanarahana nataon'i Guy Fieri: $ 80 arivo
Lisitry ny Pirates Pittsburgh: $ 47 mil pic.twitter.com/lcNrP3cj34
- Troy Beck (@troybeck) 25 Mey 2021
Ny zava-misy ataon'i Guy Fieri mihoatra ny T * m Br * dy dia tena mipetraka amin'ny fanahiko. pic.twitter.com/o49lBhZbs6
- Johnny Knoxville's Kimono🧟‍♀️ (@ash_blackghoul) 25 Mey 2021
Nahita aho fa ny Food Network dia nanome an'i Guy Fieri $ 80 mil ny 3 yrs pic.twitter.com/aRBZVGedPi
- Sonof Mosta (@Sonof_Mosta) 25 Mey 2021
Na dia mahazo karama be avy amin'ny Tambajotra Sakafo i Guy Fieri, tsy izany ihany no fomba ahazoany vola. Restaurateur fanta-daza izy miaraka amin'ny orinasa 80 manodidina ny anarany manokana. Ambonin'izany dia nifamatotra amina andian-tsarimihetsika 14 hafa izy izay vao mainka nanimba azy.
Guy Fieri no manana asa tsara indrindra manerantany. https://t.co/8qnlrF1Hr9
- Playoff Dalton (@dalton_trigg) 25 Mey 2021
Guy fieri mahazo ny max. Mendrika tsara https://t.co/8kUtJzwCNY
- kyle (@ knicks_tape99) 25 Mey 2021
Talohan'ny fifanarahana dia tombanana ho 30 tapitrisa dolara ny vola azon'i Guy Fieri. Miaraka amin'ny fifanarahana vaovao, mazava ho azy fa hiakatra avo kokoa io isa io rehefa manomboka ny vola azony.
Ny mpankafy sasany dia nanapa-kevitra ny hampitaha ny isa amin'ny karama hafa, ary izy ireo dia nampiasa ny Pittsburgh Pirates ho ohatra. Ny fifanarahan'i Guy Fieri dia mitentina avo roa heny amin'ny lisitra ananan'izy ireo.
famantarana izy fa tsy ao aminao izany
hulk hogan sy randy savage
fihaonana voalohany amin'ny olona amin'ny Internet
afaka mifankatia ve ny mpivady?
zavatra mahafinaritra hatao rehefa tena mankaleo anao